अकल्पनीय पीडाको मिलेर सामना गरौँ
साउन 32, २०७४
एक हप्तामा अकल्नीय परिवर्तन आएको छ मधेसको भौतिक क्षेत्रमा । अरु वर्ष पनि बाढी आउँथ्यो । बाढी आउँदा सर्वसाधारणले खेतबारी डुबाउँछ र भोलिपल्ट फेरि जस्ताको तस्तै हुन्छ भन्ठान्थे ।
ठूला नदीहरुको किनारका बस्तीहरु कहिलेकाही कटानले प्रभावित हुन्थे । थोरबहुत राहतको आवश्यकता हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ कतै कुनै एक दुई ठाउँमा अप्ठ्यारो पथ्र्यो । धेरै सहयोगी हातहरु निस्किन्थे । धेरैले सहयोग गर्थे । सहयोग गर्नेलाई खासै अप्ठ्यारो हुँदैनथ्यो ।
राहत पाउनेले पनि राहतमा केही सन्तोष गर्थे । पीडितको विपत्तिमा सहानुभूति राख्ने धेरै हुन्थे । पीडामा मल्हम लगाउने धेरै हुँदा पीडा कम भएको अनुभूति हुन्थ्यो । तर यसपालिको अवस्था भने नितान्त फरक छ । परिदृश्य पुरै बदलिएको छ । अकल्पनीय अवस्थ ाबनेको छ मधेसको ।
किसानलाई बाहेक अरु कसैलाई पनि पानीको आवश्यकता थिएन । खेतमा सामान्य पानी चाहिएकै थियो किसानलाई । भर्खर रोपिएको धानलाई हुर्काउन सामान्य पानी चाहिने नियमित प्रक्रिया हो । हप्ता दिन बिराएर हरेक हप्ता एक झरी राम्ररी पानी परिराखे किसान खुसी हुन्छन् ।
असोज महिनासम्म यसै प्रकारले पानी परिरहँदा किसान मात्र होइन, उब्जनी राम्रो भएर देश नै खुसी हुने अवस्था रहन्छ । यस वर्ष त साउन बित्न लाग्दासम्म खासै पानी परेको थिएन । तुलनात्मकरुपमा कमै पानी पर्ने भविष्यवाणी गरिएको पनि थियो ।
धानको रोपाइँ जसोतसो गरी सिद्धिएको थियो र सामान्य पानी पर्दा धान खेतीमा किसानले मल हाल्ने बेला हुँदै थियो । आकाशमा बादल देखिन्थ्यो तर पानी पर्दैनथ्यो तर विहीवारदेखि आकाशले आफ्नो चित्र नै बदल्यो । आकाशको बादलले बोक्न सक्ने गरी पानी ओसार्दै धरतीमा पोख्न थाल्यो ।
धरतीले थेग्न सक्नेजति मात्र नै थेग्ने हो । खाल्टाखुल्टी भरिए, खेत भरिए, खोला भरिए र पनि वर्षा रोकिएन । विहीवारको साँझदेखि परेको पानी आइतवार बिहानसम्म आइपुग्दा बल्ल अलि थाकेर विश्राम गरेको जस्तो देखियो । यस अवधिमा त बाढीले जुन उग्र रुप लियो, त्यो कसैले देखेको थिएन, कसैले कल्पना गरेको थिएन ।
सबैको सोचाइभन्दा निकै बढी पानी गाउँबस्ती पस्यो, सहर पस्यो र पानीको गति अगाडि जे जति अवरोधहरु आए सबैलाई भत्काउँदै पानीले निकास खोज्न सुरु भयो ।
आकाशमा बादल जसरी स्वच्छन्द रुपमा हावाको बहावसँगै जान्छ, धरतीमा पनि पानीले त्यही स्वतन्त्रताको खोजी गर्न थाल्दा धेरै पुल स्वाहा भए, सडक खत्तम भयो । सयौँ घरहरु बगे, कैयाँै ढले । हजारौँ घरमा पानी पस्यो । पानीले आफ्नो ताण्डव नृत्य कम गरेन ।
ताण्डवमा मग्न आकाशको बादल र धरतीको बाढीले मानवले आवागमन गर्ने सबै बाटाहरुमाथि कब्जा जमायो । सम्पूर्ण बस्तीहरुलाई चारैतिरबाट घेरेर आफ्नो नियन्त्रणमा यसरी लियो कि कोही पनि बाहिर निस्किन सक्दैन । खोला, खेत, पोखरी र सडक सबै बराबर देखियो ।
उँखुको टुप्पा र विभिन्न किसिमका रुखहरुले गर्दा मात्र फाँटहरु समुद्र नभएको जस्तो लाग्दथ्यो, हैनभने सर्वसाधारणको नजरमा फाँटहरु समुद्र बनिसकेका थिए ।
समुद्र नै गाउँ पसेकोजस्तो अकल्पनीय दृश्य हरेकले घरमै बसी अनुभव गर्ने मौका पाएको यो अपूर्व अवसर नै हो । धेरै ठाउँमा यस्तो पनि देखियो, जहाँ सधै मोटर सरर गुड्थ्यो, त्यहाँ डुङ्गा चलिरहेको छ । सडकमा डुङ्गाले गरेको शयरको दृश्य सबैका लागि अपूर्व नै थियो ।
रौतहटको सदरमुकाम गौरको परिदृश्य कतिसम्म भयावह थियो भने कतिपय पुराना घरको छतको माथि पानी चढेको थियो । नयाँ बनाएको घरको झ्यालबाट पानी भित्र पसेको थियो । घरमा चार फिटसम्म पानी सामान्य थियो । धेरैको घरको छतलाई पानीले छुने डर आइसकेको थियो ।
कतिपयले के सम्म पनि भनेका छन् भने सदरमुकाम गौरको कुनै घर बाँकी थिएन जसमा पानी नपसेको होस् । वि.सं. १९९१मा कटरबनबाट गौर बजारमा जिल्लाको सदरमुकाम सार्दादेखि लिएर अहिलेसम्मको इतिहासमा कसैले यतिको ठूलो बाढी आएको देखेका थिएनन् ।
वास्तवमा जिल्लामा सबैभन्दा बढी सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न मानिने ठाउँ भनेकै जिल्लाको सदरमुकाम हुनुपर्ने हो तर सबै सुविधाबाट वञ्चित भएर मानिस आफ्नै छतबाट आफ्नो कोठामा जान नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना कसैले गर्न सक्दैन, त्यही वास्तविकता सदरमुकाम गौरले भोग्नु प¥यो ।
हुँदाहुँदा टेलिफोन, मोबाइल, बिजुली सबै गायब । खानेपानी पनि रहेन । घरभित्रको सम्पूर्ण सामान पानीमा पौडी खेलिरहेको छ । सम्पूर्ण घरभित्र बाढीले बास गरेपछि आफू बसेको छतमा के खाने ? बालबालिकालाई के ख्वाउने ? त्यसमाथि झन् आकाशबाट पानी दर्किन सुरु भयो भने ? अवस्था कतिसम्म नाजुक थियो भने छिमेकको घरमा जान सकिँदैनथ्यो ।
छिमेकमा केही परेको छ भने त्यो पीडा केवल सुन्न सकिन्थ्यो वा देख्न सकिने छ भने हेरेर बस्न बाध्य हुनु पथ्र्यो । कुनै उपाय थिएन । मानिस निरुपाय भएको यो एउटा यस्तो अवसर हो जो एउटा जीवनले मात्र सम्झेर पुग्दैन, पुस्ता दर पुस्ता मानिसले सुनाउँछन् यस घटनालाई ।
यसले कति क्षति पु¥यायो, यसको हिसाब गरेर साध्य छैन । भौतिक क्षतिको त गणना गर्न सकिन्छ तर अभौतिक क्षतिको हिसाब गर्न सकिन्न । मानिसले जुन रुपमा मानसिक पीडा भोगेका छन्, त्यसको असर व्यक्तिमा पछिसम्म देखिएला । हरेक व्यक्तिले पीडा बेहोरेको छ ।
हर घरपरिवारमा कुनै न कुनै किसिमले भौतिक क्षति भएको छ । सामाजिक र सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको विनाश कति भयो भन्ने कुरो सबैको हिसाब गरेर साध्य छैन तर क्षति सबैतिर भएको छ । प्रकृतिको यो विनाश लीलाले स्वयं प्रकृतिको पनि केही हदसम्म विनाश गरेको छ । वास्तवमा सर्वसाधारणको लागि यो महापीडाको घडी हो ।
यो कुनै व्यक्तिगत समस्या होइन, कुनै निश्चित समुदायको समस्या होइन । सामूहिक समस्या हो, सामूहिक पीडा हो र सबैको साझा पीडा हो । थोर र बहुत फरक क्षति होला तर पीडा सबैको समान छ । यस पीडालाई कम गर्न केही हुनेले नहुनेलाई सहयोग गरेका छन् । एकले अर्काको मुख हेरेर सन्तोष गरेका छन् । एकले अर्कालाई सहयोग गरेका छन् ।
सान्त्वना दिएका छन् । यी आपसी विश्वास र प्रेमले मानिसलाई महापीडामा पनि सँगै बाँच्न सिकाएको छ, सँगै हाँस्न सिकाएको छ ।
बाढीरुपी मानवीय संकटबाट हामीले पार पाएका छौँ । अब यसले पु¥याएको क्षतिको सामना गर्नु छ । एकले अर्काप्रति सहानुभूति दर्शाउँदै हामीले एकले अर्कोलाई सकेको मानवीय सहयोग पु¥याउनु छ । यस घडीमा हामी सबैले मिलेर सामना गर्नु छ ।
हातमा हात मिलाई हामी सबै जुटौँ, यस अकल्पनीय पीडाको मिलेर सामना गरौँ । जे हुनु भइहाल्यो, अब सकेसम्म सचेत बनौँ । प्रकृतिको अगाडि हामी सबै विवश छौँ । बाढीपछिको पीडाबाट बच्ने प्रयासमा हामी सबैले ध्यान दिनु परेको छ ।
अब स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरु देखिन सक्छ, यसमा गम्भीर भएर लाग्यौँ भने समयका अन्तरालमा बाढीको पीडा कमजोर हुँदै जाने छ ।